Misokatra Tarihin’ny Shaman Ho Amin’ny Fizahantany Ara-Tontolo Iainana Indray Ny Tendrombohitra Avo Indrindra Ao Brezila · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Taisa Sganzerla
Voadika ny 28 Aogositra 2016 8:28 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, русский, Ελληνικά, Español, नेपाली, čeština , Deutsch, Nederlands, 日本語, Italiano, Português
Fandehanana voalohany ho any an-tendrombohitra avo indrindra ao Brezila hisava ny làlana amin'ny fizahan-tany maitso . Sary: Guilherme Gnipper/Funai, nahazoana alàlana
Navoakan'ny Instituto Socioambiental, voalohany tao amin'ny Medium ity tantaran'i Marcos Wesley ity , ary navoaka eto indray ho anisan'ny fiaraha-miasa amin'ny Global Voices.
Raha efa traikefa mahafinaritra sahady ny fianihana ny Pico da Neblina (Tendron'ny Zavona), alaivo sary an-tsaina ny dia tarihin'ny shaman Yanomami iray, izay nandany ny hatanorany manontolo teo anilan'io tendrombohitra io?
“Izany toerana izany no fonenanay, ary antsoinay hoe Irokae (kiakan'ny gidro guariba )”, hoy ilay shaman Carlos Yanomami tamin'ny fiteniny, nanondro tany amin'ny ala, izay nonenan'ireo havany tanaty trano iray, manao fety sy manao fombafomba, 60 taona lasa izay.
Mahalala momba ny Pico da Neblina ireo mpianika tendrombohitra manerana izao tontolo izao izay manana hahavo mirefy 2.995 metatra ambonin'ny haavon'ny ranomasina, izany no tendrombohitra avo indrindra ao Brezila. Mitoetra eo afovoan'ny alan'i Amazona, nanomboka tamin'ny 2003 no nakatona ny fitsidihana azy tamin'ny filazana avy amin'ny biraon'ny lehiben'ny fampanoavana federaly sy ny fanapahan-kevitra avy amin'ny IBAMA, sampan-draharaha misahana ny tontolo iainana ao Brezila. Sorena ireo mpianika tendrombohitra sasany tamin'ny tsy fahafahana niditra tao an-tendrombohitra, kanefa nilaza ny mpampanoa lalàna fa misy zavatra tokony hatao mba hampitsaharana ny fahasimban'ny tontolo iainana ao amin'ny faritra sy mba hiarovana ny zon'ireo Yanomami.
Tokony hamarana ny famerana ny fitsidihana ny tetikasam-pizahan-tany maitso Yaripo, narafitr'ireo Yanomami miaraka amin'ny fanohanan'ny Instituto Socioambiental (Ivontoerana Misahana Ny Tontolo Iainana Ara-tsosialy). Hanomboka amin'ny 2018 ny dia an-tongotra lavitra amin'ny lalan-kely ary efa nomanina hosokafana indray sy hotarihin'ireo Yanomami manokana. Ao anatin'ny fahafaha-miditra ny faritra anaty fanaraha-maso, ho afaka hianatra ny kolontsaina Yanomami ireo mpizaha tany, hankafy ny fomba fandraisan'izy ireo vahiny, ary hanohana ny fanajana ny Amazona sy ireo mponina teratany.
Tendrombohitra eo akaikin'ny Pico da Neblina. Sary: Guilherme Gnipper/Funai, nahazoana alàlana.
Iny volana Jolay iny no manamarika ny fahavitan'ny dingana voalohany amin'ny fisokafana indray : nandeha an-tongotra nandritra ny folo andro tamin'ny làlana rehetra mankany an-tampon'i Yaripo, araka ny iantson'ireo Yanomami an'ilay tendrombohitra, ny iraka miisa 32 olona mba hanadihady sy haka an-tsarintany ny fepetran'ny làlana. Ankoatra an'i Carlos dia nisy Yanomami 18 hafa tao anatin'ny ekipa, 16 ny lehilahy ary roa ny vehivavy, Maria sy Floriza. Manazatra tena hanara-maso ny lalana sy hanao mpitari-dalana, mpitondra entana, mpahandro sakafo, ary hitantana ny tetikasa fizahan-tany maitso izay kasain'izy ireo ho ampiroboroboana. Nandray anjara tamin'ny dia famakivakiana ny lalana ihany koa ireo solontenan'ny ICMbio (sampan-draharaha miaro ny tontolo iainana ao Brezila ), ny biraon'ny lehiben'ny fampanoavana, ary ny tafika Breziliana .
Nitondra fitsongoan-dia GPS, fakantsary, sy zavatra maro mahaliana, sady mihaino ny tantaran'ny shaman Carlos ny mpisafo tany no mamita ny sakeli-dalana mirefy 36 kilometatra (22 maily), izay nanomboka tao amin'ny tanànan’ Igarapé Tucano, ao amin'ny fanatobiana ny Yanomami tompontany, ao akaikin'ny tanànan'i São Gabriel da Cachoeira ao amin'ny fanjakana Amazonas Breziliana .
Nanamarika ny toerana izay nahitany biby na diam-biby, toerana misy rano azo sotroina, ampahan-tsakeli-dalana mila fanatsarana, ary ny toerana sahaza indrindra hanorenana lasy amin'ny alina ny ekipa tompontany teo ampamitana ny làlana lavitra sy toetany mikitoatoana. Nanamarika ny faritra saro-pady indrindra eo amin'ny tontolo iainana ihany koa ny ekipa.
Tafiditra ao amin'ny tantara i i Maria Yanomami, 52 taona amin'ny maha-vehivavy Yanomami voalohany indrindra azy tonga teny an-tampon-tendrombohitra Yaripo. Na izany aza, tsy afaka namita ny dia an-tongotra ny namany mpiara-dalana aminy, Floriza Yanomami, noho ny fanajana sy ny fahatahorana ny fomba amam-panaony manokana: tokony ho tonga teny amin'ny tampon-tendrombohitra izy ny andro talohan'izay , kanefa tonga ny fadim-bolany, ary naleony niverina toy izay tsy hanaja ny fomba amam-panao ka mety ahatezitra ireo fanahy izay monina ao an-tampon-tendrombohitra. Mety hampidi-doza ny ain'ireo olon-drehetra izay niaraka taminy nandritra ny dia izy, araka ny fombandrazana, raha toa ka namita ny dia kanefa tonga fadim-bolana.
Antenaina hanome endrika hafa amin'ny fidiram-bolan'ireo Yanomami, izay mila loharanom-bola hividianana fitaovana tena ilaina toy ny: fitaovam-pambolena, fitaovana an-dakozia, lamba firakotra, ary fitafiana ny tetikasa Fizahan-tany Maitso Yaripo.
Tanora Yanomami iray nandray anjara tamin'ny fisafoan-tany ho any Pico da Neblina. Sary: Guilherme Gnipper/Funai, nahazoana alàlana.
Antenaina hanana fidiram-bola ny Yanomami 80 amin'ny alàlan'ny fanomezana tolotra tsy tapaka ho an'ny mpitsidika ary mahazo tombontsoa amin'izany ankolaka ny olona 800 amin'ireo havany sy ireo olona miankina aminy amin'ny fametrahana ity tetikasan'ny fizahan-tany ara-tontolo iainana mifototra amin'ny vondrom-piarahamonina ity.
Tokony hahazo tombontsoa amin'ny fanatsarana ny sakeli-dalana ihany koa ny fikambanan'ny vondrom-piarahamonina AYRCA , izay andraisan'ny olona Yanomami rehetra anjara.
Hahazo fiainam-baovao ny tantaran'i Carlos Yanomami sy ny vahoakany rehefa hisokatra ihany ho amin'ny fizahan-tany i Yaripo, ary hampiely ny resaka momba azy ireo manerana izao tontolo izao ireo mpitsidika an'i Pico da Neblina .
Mitady mpanohana ny tetikasa Fizahan-tany Ara-Tontolo Iainana Yaripo. Raha liana ianao amin'ny fanohanana izany hetsika izany na mila fanazavana fanampiny momba azy io, dia azafady mandefasa mailaka any amin'ny marcos@socioambiental.org.